Mpanamory faribolana, fampitaovana jiro ao an-trano, metatra Watt Smart - Hawai
OEM & ODM & OBM
Mpanaparitaka faribolana Hydraulika
MCB Miaraka amin'i Padlock
Fitaovana fanampiny mpanampy amin'ny faritra
Blue Series Circuit Breaker
M Series Circuit Breaker
Green Series Circuit Breaker
Masinina fanoratana tsindrona
Andalana mandeha ho azy
Mpiaro mahira-tsaina microcomputer
WiFi switch & socket
Fanaraha-maso sy fiarovana
Fanovana famindrana mandeha ho azy
Mpanaparitaka boribory ambanin'ny tany (GFCI)
Fitaovana tariby elektrika
Contact & fampitàna & Starter
Fonosana plastika vita amin'ny vy
Hifindra mitokana HV
TOSIKARATRA avo lenta
Tselatra avo ety ivelany
Fameram-potoana & Meter
Herinaratra tsy tantera-drano
Waterproof Switch & Socket
switch switch & tantera-drano
Fiovana voaaro amin'ny toetrandro
Fitaovana fiarovana amin'ny Surge (SPD)
Epoxy Net Cabinet
Box Box Combiner
EX Porofon'ny herinaratra
Controller famatsiana herinaratra
Clamp amin'ny fihenjanana sy ny fampiatoana fampiatoana
Quick Joint Series
Vokatra bebe kokoa
Fanairana amin'ny varavarana
Fitaovana fametrahana fitaovana sy fitaovana
fanaraha-maso thermostat sy mari-pana
Sarimihetsika metaly ho an'ny Capacitor
S7DC Mini Circuit fanapahana
· DC 1000V 63Amp · Mety amin'ny Protection to DC circuit overload sy ny circuit fohy · mifanaraka amin'ny IEC898 sy GB10963 Standard
Ny ekipanay QC rehetra dia tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana
Fanaraha-maso kalitao matanjaka eo ambanin'ny ISO 9001: 2000
Ambongadiny 10KA 6KA iec voamarina mcb Mini Circu ...
Ambongadiny C7S andian-dahatsoratra AC contactor 9-95A conta ...
Ambongadiny YKMF andian-dahatsoratra 20A 24A 40A 63A Modular C ...
Ambongadiny 0 ~ 999999. 9kwh 1.5 (6) A 5 (20) A 10 (40) ...
Ambongadiny 500V 690V 125A mpihazon-tsolika mandrindra
YUANKY hatramin'ny 1989
Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd. fantatra ihany koa amin'ny hoe YUANKY dia natomboka tamin'ny 1989. YUANKY dia manana mpiasa mihoatra ny 1000, mahatratra 65000 metatra toradroa ny velarany. Manana tsipika famokarana maoderina sy fitaovana fanaraha-maso avo izahay miaraka amin'ny fitantanana siantifika, injeniera matihanina, teknisiana avo lenta ary mpiasa mahay. YUANKY dia mampiditra ny R&D, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy hananganana vahaolana elektronika sy elektrika feno ..
Ny mpandika faribolana fiarovana mahery an'i Eaton dia manampy ny mpanjifa C&I
Nov / 09/2020
Ny mpamadika fizaran-tany marani-tsaina an'i Eaton (fantatra amin'ny anarana hoe mpamatsy herinaratra fitantanana angovo) ho an'ny mpampiasa trano dia naseho tamin'ny fampisehoana tamin'ny International Solar Energy Show tamin'ity taona ity. Sonnen dia naneho ny fanapahana haingam-pandehan'i Eaton tamin'ny alàlan'ny fametrahana mavitrika. Nasehon'ilay fitaovana ny fahafahan'ny ec ...
Ireo rivotra ambanin'ny radara ireo dia hampitombo ny tahiry UPS
Nov / 07/2020
Ny Motley Fool dia natsangana tamin'ny taona 1993 avy amin'ny mpirahalahy Tom sy David Gardner. Amin'ny alàlan'ny tranokalanay, podcast, boky, tsanganana an-gazety, fandaharana amin'ny onjam-peo ary serivisy fampiasam-bola mandroso, manampy olona an-tapitrisany maro hahazo fahalalahana ara-bola izahay. United Parcel Service (NYSE: UPS) dia nanana ampahefatra niavaka iray hafa, ...
Amin'izao fotoana izao, ny bateria lithium bateria sy ny bateria lithium fitehirizana angovo dia tena sarobidy amin'ny indostria.
Sep / 28/2020
Amin'izao fotoana izao, ny fampiharana ara-teknika ny bateria lithium amin'ny fitehirizana angovo dia miompana indrindra amin'ny sehatry ny famatsiana herinaratra miorina amin'ny foibe, rafitra fitehirizana optika an-trano, fiaran'ny herinaratra sy tobin-tsolika, fitaovana elektrika, fitaovana birao an-trano ary sehatra hafa. Nandritra ny dimy faha-13 Eny ...
fanavaozana iraisana sy fanamafisana ny teknolojia nomerika
Sep / 27/2020
Amin'izao fotoana izao, ny fanovana dizitaly dia nanjary ny marimaritra iraisan'ny orinasa, fa ny fiatrehana ny teknolojia nomerika tsy misy farany, ny fomba hanaovana ny teknolojia milalao tombony lehibe indrindra amin'ny sehatry ny asa eo amin'ny orinasa dia ny ankamantatra sy ny fanamby atrehin'ireo orinasa maro. Mikasika izany, nandritra ny ...
Ny vaovao CCTV dia nitanisa ny antontam-bato mandrotsaka ho iray amin'ireo fito amin'ny fotodrafitrasa vaovao lehibe.
Sep / 25/2020
Abstract: ny 28 Febroary 2020, navoaka ny lahatsoratra hoe “tonga ny fotoana hanombohana fananganana fotodrafitrasa vaovao”, izay niteraka fifantohana sy adihevitra be momba ny “fotodrafitrasa vaovao” eny an-tsena. Taorian'izay, ny vaovao CCTV dia nitanisa ireo antontan-taratasin-ketra toy ny tamin'ny ...
momba anay ny tamba-jotra varotra mifandraisa aminay asa
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny mailakao aminay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
© Copyright - 2020-2020: Fanohanana ara-teknika: